ကမာသည် အခွံနှစ်ခြမ်းရှိသော ရေနေခရုမျိုးယောက်သွားကြီးတစ်မျိုးဖြစ်၍ ထို အခွံနှစ်ခြမ်းကို ရုန်းနိုင်၊ ကြုံ့နိုင်သော အကြော တစ်ခုက တစ်နေရာတွင် ပတ္တာသဖွယ် ဆိုင်းထားသည်။ ယေဘုယျ အားဖြင့် အပေါ်ဘက်အခွံသည် ပြား၍၊ အောက်ဘက်အခွံသည် ခွက်ပြီးလျှင် ထိုအခွက်ထဲ၌ ကမာ၏ ကိုယ်ခန္ဓာ တည်ရှိသည်။ ကမာသည် အပူပိုင်းဇုန်နှင့် သမပိုင်းဇုန်ရှိ ပင်လယ်ကမ်းခြေ တစ်လျှောက် ရေတိမ်ရာ အရပ်များတွင် နေထိုင်သည်။ အေး လွန်းသော ဝင်ရိုးစွန်းဒေသရှိ ပင်လယ်ကမ်းခြေများတွင်မူ မတွေ့ရချေ။
ဥမှ ပေါက်ခါစ သားငယ်များတွင် အခွံမာ ပါမလာချေ။ သားငယ်တို့သည် ဥမှပေါက်ပြီးနောက် နာရီ အနည်းငယ် အတွင်း၌ ဟိုဟိုသည်သည် ကူးခတ်ပြီးသော် ထိုနေ့မှာပင် ကိုယ်ပေါ်၌ နှစ်ခြမ်းစပ်အခွံမာ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ထိုအချိန် တွင် ဒီရေကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ပင်လယ်ရေကြောင်း ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ကမာပေါက်စ တို့သည် တစ်ခါတစ်ရံ ခရီးဝေးသို့ ပါသွားတတ် ကြသည်။ သို့သော် အများအားဖြင့်ကား ရေအောက်ရှိ အခြားသတ္တဝါများ အစားခံရ၍သော်လည်းကောင်း၊ ညွန်တွင်နစ်၍ သေဆုံးခြင်း ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ အနည်းငယ်သာ အသက် ရှင်ကျန်ရစ်လေ့ ရှိပေသည်။ အသက်မသေကျန်နေခဲ့သော သားငယ်အချို့သည် ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ် ကြာသောအခါ ရေအောက်ရှိ ကျောက်ဆောင်ကျောက်တုံး စသည်တို့၌ ထာဝစဉ် တွယ်ကပ် ကြတော့၏။ ထိုသို့ တွယ်ကပ်ပြီးနောက် မကြာမီပင် ရေထဲ၌ ကူးခတ်သွားလာနိုင်သော အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ခြေ ထောက်များလည်း ပျောက်ကွယ်သွားလေသည်။ ကမာ တစ် ကောင်သည် ပေါက်ပွားချိန်တစ်ချိန်အတွင်း၌ အကောင်ကလေး များကို သိန်းသန်းနှင့်ချီ၍ ပေါက်ဖွားနိုင်သည်။ အရွယ်ကြီး သော အမျိုးဖြစ်က ပိုမိုများပြားစွာ ပေါက်ဖွားနိုင်၍ သားငယ်တို့သည် နွေးသော ဒေသများ၌ ပို၍ လျင်မြန်စွာ ကြီးပြင်း လွယ်လေသည်။
ကမာတို့တွင် အသက်ရှင်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး ရန်သူ ပေါင်းများစွာနှင့် အမြဲတွေ့ကြုံနေကြရပေသည်။ အခွံမာ မဖုံးမီ ရေထဲ၌ ကူးခတ်သွားလာနေဆဲ သားငယ်ဘဝတွင်သာ ရန်သူ ရှိသည်မဟုတ်၊ အခွံမာ ဖုံးပြီးနောက် ကြီးပြင်းသည့်အရွယ်တွင် လည်း ရန်သူများ ရှိသည်။ သားငယ်ဘဝတွင် ငါးနှင့်တကွ အခြားရေ သတ္တဝါများအပြင် ကမာကြီးတို့၏ အစားကိုခံရ၏။ ကြီးပြင်းသည့်အရွယ်တွင်မူ အချို့ငါးမျိုးက ကမာခွံကို ဟူ၍ သော်လည်းကောင်း၊ အချို့က အခွံကို ကိုက်ဖေါက်၍သော်လည်းကောင်း ကမာ၏ အသားကို စားသောက်တတ်ကြ၏။ ထိုသို့ အစားခံရသဖြင့် တစ်နှစ်တစ်နှစ်တွင် ရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားနိုင်သည့် ကမာ ပေါင်းများစွာကပင် ဆုံးရှုံးသည်။
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်၌ ငွေအားလူအားဖြင့် ကမာလုပ်ငန်းကို အကြီးအကျယ် ပြုလုပ်နေကြရာတွင် ပုလဲ ရရှိရေးထက် လူတို့ စားသုံးရန် ဟင်းလျာအတွက် ပြုလုပ်ခြင်းက ပို၍ ကြီးကျယ် သည်။ ကမာလုပ်ငန်းကို နိုင်ငံပေါင်း ၃ဝ ကျော်တွင် လုပ်ကိုင် လျက်ရှိသည့်အနက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ပြင်သစ်၊ ဟော်လန်၊ ဗြိတိသျှကျွန်းစု၊ ဩစတြေးလျ၊ ဒိန်းမတ်၊ဂျပန်၊ နယူးဇီလန်၊ ကနေဒါနှင့် မက္ကဆီကိုတို့မှာ အကြီးကျယ်ဆုံး ဖြစ်၍ အများဆုံးထွက်သောနိုင်ငံမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်တစ်နှစ်တွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ကမာပေါင် ချိန် ၁၂ ကုဋေမျှထွက်၍ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တစ်နိုင်ငံ တည်းမှ ထွက်သည့် ပေါင်ချိန်မှာ ၁၀ ကုဋေကျော်သည်။ ကမာလုပ်ငန်းကို အကြီးအကျယ် လုပ်ကိုင်သည့် နိုင်ငံ အများမှာပင် ကမာကောင်များကို အကြီးအကျယ် စံနစ်တကျ မွေးမြူကြသည်။ ဤသို့ မွေးမြူရာတွင် အဓိကအားဖြင့် လေးဆင့်ရှိ၍ ထိုအဆင့်လေးဆင့်မှာ ကမာများ ပေါက်ပွား နေထိုင်ရန် အောက်ခံမြေကို မာကျောအောင်အပြင် အမှိုက် သရိုက်နှင့် ရန်သူများ ကင်းရှင်းအောင် ပြုပြင်စီမံပေးရခြင်း၊ ကမာကောင်များ စွဲကပ်ရန် သန့်ရှင်းသော ကမာခွံများ ကျောက်တုံးများ သစ်ခက်များကို ချပေးရခြင်း၊ ကြီးပြင်းလွယ် အောင် ပြုပြင်ထားသော နေရာသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ပေးရခြင်း နှင့် ဖွံ့ဖြိုး၍ ရောင်းပန်းလှအောင် ပြုစုပေးခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ ကမာမွေးမြူသည့် လုပ်ငန်းကို ယခုမှမဟုတ်၊ ရှေးပဝေသဏီ ကပင် စတင်ခဲ့ကြသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၌ အလွန် ရှေးကျသော အခါတစ်ပါးက ဤလုပ်ငန်း ထွန်းကားခဲ့ဘူး၍ အီတလီနိုင်ငံ၌ ဘီစီ ၁၀ဝ လောက်တွင် စတင် ခဲ့လေသည်။
↑ Jell, Peter A. (1980). "Earliest known pelecypod on Earth —anew Early Cambrian genus from South Australia". Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology4(3): 233–239. doi:10.1080/03115518008618934.
↑ "Anatomy, ecology and affinities of the Australian early Cambrian bivalve Pojetaia runnegari Jell" (January 1983). Journal of Paleontology 57 (1): 73–92.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကမာ&oldid=722639" မှ ရယူရန်
၂၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၀:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၀:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။